PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-25 - Basangena ezintangeni ngokacassper
Basangena ezintangeni ngokacassper
Ilanga langeSonto - 2018-11-25 - Izindaba - SANDILE MAKHOBA
NAKUBA namanje umasipala wetheku, nophiko olungaphansi kwawo idurban Tourism, bewachitha amahlebezi okuthi bawuxhasile umcimbi kaCassper Nyovest ongomgqibelo ozayo, ifill Up Moses Mabhida Stadium, kodwa kunezimpawu ezibukeka ziyizinkomba zokuthi umasipala uyingxenye yawo.
Kuzokhumbuleka ukuthi kuke kwaqubuka umsindo ngesikhathi kuvela imibiko engaqinisekiswanga yokuthi umasipala ukhiphe isizumbulu sezigidi zamarandi uxhasa lo mcimbi kodwa umasipala nocassper Nyovest bakuphika lokho.
Phakathi kwezinto ezibonakala ziwuphawu lokuthi laba bayasebenzisana yi- logo yedurban Tourism efakwe esikhangisweni salo mcimbi.
Kanti futhi okunye okuyinkomba yokuthi kunokusebenzisana wukuthi esithangamini sabezindaba ebesibizwe ngucassper Nyovest emoses Mabhida Stadium bekukhona nezisebenzi zawo umasipala ezingaphansi kwedurban Tourism, zifake nezikibha zakhona edurban Tourism.
Naphezu kwalezi zimpawu, umnu Sbu Zondi, okhulumela idurban Tourism, ekhuluma NELANGA Langesonto ngolwesihlanu uphikile ukuthi bayingxenye yalo mcimbi, wathi kusaxoxiswana.
“Ukubonakala kophawu lwethu ezikhangisweni kusho khona ukuthi siyaxoxisana, akusho ukuthi kukhona esesivumelene ngakho,” kusho yena.
Mayelana nokubonakala kwezisebenzi zedurban Tourism esithangamini sabezindaba ebesibizwe ngucassper uthe lokho akusho lutho.
“Nami ngangikhona lapho. I-moses Mabhida (Stadium) ngeyethu, sinezinto eziningi esizenza khona. Sangena esithangamini sabezindaba ngoba sasesiqedile esikwenzayo, hhayi ngoba siyingxenye yomcimbi,” esho.